E-News Nepali || Fast and Accuracy » ज्वाईं खोज्दै किम: दाइजोमा मिल्नेछ सुनको चम्किलो कार, बहिनीसँग विवाह गर्न हुनुपर्छ यस्ता विशेषता !
ज्वाईं खोज्दै किम: दाइजोमा मिल्नेछ सुनको चम्किलो कार, बहिनीसँग विवाह गर्न हुनुपर्छ यस्ता विशेषता !
एजेन्सी। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोंग प्रायः आफ्नो कामहरुका कारण निकै चर्चामा रहने गर्छन्। आजकाल उनी फेरी चर्चाको बिषय बनेको छन्। वास्तवमा, किम आफ्नी बहिनीको लागि दुलहा खोज्दैछन्। तर किमकी बाहिनीको दुलहा बन्न त्यति सजिलो भने छैन। उनले आफ्नी बाहिनीको दुलहा बन्नका लागि कैयौं सर्तहरु राखेका छन्।
उनको पहिलो सर्तका अनुसार‘केटाको पहिले कसैसँग पनि सम्बन्ध नभएको हुनुपर्छ’। किमले घोषणा गरेका छन् कि, हुनेवाला दुलहालाई दाइजोमा चम्किलो सुनको कार दिइनेछ।अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टका अनुसार, उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति ‘किम जोंग’ले उनकी बहिनी ‘किम यो जोंग’को विवाह गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रकाशित मिति १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०२:२१